Ciidamo careysan oo la wareegay xarun ku taalla magaalada Boosaaso - Idman news
Ciidamo careysan oo la wareegay xarun ku taalla magaalada Boosaaso
Boosaaso (Caasimada Online) – Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Puntland oo careysan ayaa lagu soo warramayaa in saacadihii la soo dhaafay ay la wareegeen gacan ku heynta xarun wasaaradeed oo ku taalla magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Ciidamadan oo gadood ka sameeyey Boosaaso ayaa la wareegay xarunta wasaaradda kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Puntland, sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadaas oo wata gaadiidka dagaalka ay ka cabanayaan arrimo la xiriira mushaaraad ka maqan muddo dhowr bilood ahg, taas oo keentay inay la wareegaan dhismaha wasaaradda, sida ay warbaahin u sheegeen saraakiil ka tirsan Puntland.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamadu xarunta ay ku xayireen mas’uuliyiin ay ka mid yihiin wasiir ku xigeenka wasaaradda Kalluumeysiga iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaas, iyaga oo ku amray in aysan ka bixi karin halkaasi.
Illaa iyo hadda ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay madaxda Puntland oo ku aadan xiisadaasi ka taagan bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulkaasi.
Xaaladda ayaa haatan kacsan, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada ay xireen dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Si kastaba ma’ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamo gadoodsan oo ka tirsan kuwa Puntland ay la wareegaan xarun wasaaradeed oo uu leeyahay maamulkaasi.
Previous Ciidamo ka tirsan Puntland oo xoog kula wareegay xarun wasaaradeed – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next Maxuu salka ku hayaa socdaalka Taliyaha xoogga dalka ee G/Gedo? – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
DAAWO:-Fanaanka Maxamed Bk Oo Shaaciyay In Uu Si Rasmi Ah Uga Baxay Fanka
WArka Duhur Shabelle TV 22.10.2020
DAAWO:-Fanaanka Maxamed Bk Oo Shaaciyay In Uu Si Rasmi Ah Uga Baxay Fanka October 22, 2020
WArka Duhur Shabelle TV 22.10.2020 October 22, 2020
Xubaha Cusub ee Golaha Deegaanka Galkacyo Oo la Dhaariyay+Sawirro October 22, 2020
Total visitors : 13,532